Cindezela umshini Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Cindezela umshini Factory
Izici zokusebenza okuyinhloko: Ukuqina komzimba (ukusonteka) 1/6000. Sebenzisa i-OMPI pneumatic clutch eyomile kanye ne-brake. Isilayida sisebenzisa izindlela ezimbili zomhlahlandlela ohlangothini lwesithupha, kanti isiqondisi sesilayida sisebenzisa "inqubo yokuqeda imvamisa ephezulu" kanye "nenqubo yokugaya ujantshi", enokugqoka okuphansi, ukucacisa okuphezulu, isikhathi sokugcina ngokunemba nokuthuthuka kwempilo yesikhunta. I-crankshaft yenziwe ngezinto ezinamandla amakhulu ze-alloy 42CrMo, enamandla aphindwe ka-1.3 kunensimbi engama-45 futhi inempilo yenkonzo ende. T ...
Izici zokusebenza okuyinhloko: Ukuqina komzimba okuphezulu (ukusonteka) 1/8000: ukusonteka okuncane nesikhathi sokugcina esinembile. Sebenzisa i-pneumatic wet clutch brake, ukuvikelwa kwemvelo, akukho ukungcola, umsindo ophansi, impilo ende yokusebenza. Isilayida sisebenzisa umugqa womhlahlandlela wamakhona amane kanye nohlangothi lwamacala ayisishiyagalombili, ongathwala umthwalo omkhulu we-eccentric ukuqinisekisa ukugcinwa kwesikhathi eside nokuzinzile kokunemba kokushaya. Isilayidi somhlahlandlela wesilayidi sisebenzisa "ukucisha ukuvama kakhulu" kanye "nenqubo yokugaya ujantshi" ...
Izici zokusebenza okuyinhloko: I-fuselage ine-rigidity ephezulu kakhulu (ukusonteka) 1/15000, ukusonteka okuncane, isikhathi sokugcina esinembile, ukucacisa okuphezulu kwemikhiqizo yokushaya, ukubuya okuncane okwenziwe, futhi kungathwala imithwalo emikhulu emikhulu. Sebenzisa i-pneumatic wet clutch brake, ukuvikelwa kwemvelo, akukho ukungcola, umsindo ophansi, impilo ende yokusebenza. Isilayida sisebenzisa umugqa womhlahlandlela wamakhona amane namacala ayisishiyagalombili, ongathwala umthwalo omkhulu we-eccentric: ukuqinisekisa ukugcinwa kwesikhathi eside nokuzinzile kwe-stampin ...
Izici zokusebenza okuyinhloko: Ukuqina okuphezulu (ukusonteka) komzimba nesilayida 1/8000: ukusonteka okuncane nesikhathi sokugcina esinembile. Sebenzisa i-pneumatic wet clutch brake (uhlobo oluhlanganisiwe): ukuvikelwa kwemvelo, akukho ukungcola, umsindo ophansi, impilo ende yokusebenza. Isilayida sisebenzisa umugqa womhlahlandlela wamakhona amane kanye nohlangothi lwamacala ayisishiyagalombili, ongathwala umthwalo omkhulu we-eccentric ukuqinisekisa ukugcinwa kwesikhathi eside nokuzinzile kokunemba kokushaya. Isilayidi somhlahlandlela wesilayidi sisebenzisa "ukucisha imvamisa ephezulu" i ...
Izici zokusebenza okuyinhloko: Isakhiwo se-fuselage sakhiwe izingxenye ezintathu (isihlalo esiphakeme + umzimba wasepulatifomu ophakathi +), futhi ibha yokuqinisa isetshenziselwa ukuxhumana okuqinile kokukhiya. Ukuqina okuphezulu (ukusonteka) 1/9000 ye-fuselage ne-slide block: ukusonteka okuncane nesikhathi sokugcina esinembile. I-pneumatic wet clutch brake (uhlobo oluhlanganisiwe) isetshenziselwa imishini engaphansi kwamathani ayi-600, futhi i-clutch brake eyomile (uhlobo oluhlukanisiwe) isetshenziselwa imishini engaphezu kwamathani ayi-800. I-slide block isebenzisa amakhona amane ne-eig ...
Izici eziyinhloko zokusebenza okukodwa: Sebenzisa ukwakheka komzimba okunamandla, ukusonteka okuncane nokunemba okuphezulu Isilayida sisebenzisa indlela yomhlahlandlela emaceleni ayisithupha, futhi isiqondisi sesilayida sisebenzisa "ukucisha ukuvama kakhulu" kanye "nenqubo yokugaya ujantshi": ukugqoka okuphansi, ukucacisa okuphezulu, isikhathi esinembile sokugcinwa kwesikhathi, nempilo yesikhunta ethuthukisiwe. I-crankshaft yenziwe ngezinto ezinamandla amakhulu ze-alloy 42CrMo, enamandla aphindwe ka-1.3 kunensimbi engama-45 futhi inempilo yenkonzo ende. Ithusi ...